Umkhiqizi we-China Quality Audio Amplifiers, Factory - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Izikhulisi Zomsindo
Isiginali evulekile ebuthaka izokwandiswa ukuze ihambisane nokufaka kwe-AUX (350mv). I-Phono Preamp for Turntable ingasetshenziselwa ukuguqula okokufaka okuningi kwe-AUX okuvame ukutholakala kuma-amplifiers alalelwayo nakuzinhlelo zemisindo emincane. Kuyisici esidingekayo sokudluliswa kwamarekhodi e-vinyl kumaCD kusetshenziswa umshini wokushisa iCD wekhompyutha (isoftware ethile ingadingeka kulolu hlelo lokusebenza).
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Izikhulisi Zomsindo abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Izikhulisi Zomsindo esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.